काठमाण्डौँ १७ असाेज– तपाईंलाई डेंगी लाग्छ कि भन्ने डर छ ? तपाईंको छिमेकमा कसैलाई डेंगी लागेको छ ? यस्तो छ भने समयमै सचेत हुनुहोस् ! तपाईंलाई पनि लामखुट्टेले टोकेर डेंगी सर्न सक्छ। आफ्नो घरवरिपरि डेंगी सार्ने लामखुट्टेको लार्भा खोजेर आफैं नष्ट गरे बच्न सकिने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको डेंगी नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलका विज्ञ सहभागीले यस्तो उपाय बताएका हुन्।
काठमाण्डौका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि डेंगी भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँको स्वास्थ परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा उहाँलाई डेंगीको संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो ।
उहाँलाई ब्लू क्रस अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा भर्ना गरिएको छ । यसअघि कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई पनि डेंगीको संक्रमण भएको थियो । काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा डेंगीको संक्रमण फैलिएको छ । डेंगीका कारण यो वर्ष सात जनाको ज्यान गएको छ भने सयौँ प्रभावित छन् ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, अनाश्यक बाहिर ननिस्कने, शरीरको खुला भागमा लामखुट्टे भगाउन मलम लगाउने, घरवरिपरि सफा राख्ने, घरमा झ्याल–ढोकामा जाली राख्ने, घरवरिपरि टायर, ड्रम, बाल्टिन, बोटल, बट्टा, पानीको ट्यांकी खुला नराख्ने, शकांस्पद ठाउँका लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने। याे समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे । याे समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे ।